Luz de Maria - Ny fotoana dia "Ankehitriny"! - Countdown ho an'ny Fanjakana
Saint Michael ilay arkanjely to	Luz de Maria de Bonilla	ny 19 aogositra 2020:
Vahoakan'Andriamanitra: Raiso ny fiadanan'Andriamanitra izay ilaina amin'ny olombelona rehetra.
Amin'ny fotoana izay hisondran'ny fahatezerana maha-olona amin'ny ankamaroan'ny firenena eto amin'izao tontolo izao ary ny lehilahy dia hanafika ny rahalahiny; ary rehefa miandrandra sy tiana ny fandriam-pahalemana satria efa nifangaro teto an-tany ny fifandirana, dia manontania tena hoe: Amin'ny firy ao amin'ny Apokalipsy no misy anao?
Rehefa mahita ireo izay nanatrika ny lamesa isan'andro ianao ary nahazo ny Eokaristia… Rehefa mahita ireo izay mivavaka amin'ny fotoana sy toerana rehetra ianao, ireo izay nametraka fisalasalana momba ny fitiavam-pivavahany… Rehefa hitanao ireo niakanjo tamin'ny fomba maotina noho ny lavadavaka noho ny tahotra fanenjehana ary fandavana ny Mpanjakantsika sy Jesosy Kristy Tompontsika ho "Tompony ary Andriamaniny" hamonjy ny ainy… Matokia fa tsy hihena ny fanenjehana, fa hohamafisina kosa amin'ny tena Vahoakan'ny Tompontsika ary Jesosy Kristy Mpanjaka.
Any amin'ny toerana lavitra, any amin'ny crypts an'ny fiangonana taloha, any amin'ny toerana tsy namboarina, angamba eo amin'ny tsy ampoizina indrindra, dia hohenoinao ny Mass Mass ary handray an'i Kristy eo amin'ny Eokaristia Masina avy amin'ny tanan'ny pretra mahatoky - ireo izay miankohoka amin'ny Kristy Eokaristia, izay tia ny Mpanjakavavintsika sy ny Renintsika any an-danitra sy ny tany — noho ny fisarahana mazava sy mazava eo amin'ireo izay hijanona ho mitoetra ao amin'ny tena Magisterium an'ny Fiangonan'i Tompontsika sy i Jesoa Kristy Mpanjaka ary ireo izay niaina ho Fariseo tao amin'ny Fiangonana. efa nanenjika ny olona mahatoky.
Vahoakan'Andriamanitra: Aza manao tahaka ny Farisiana (Mt 23); manaova toy ny zaza mahatoky amin'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Tompontsika, miova fo, miatrika ilay fanadiovana efa ho tonga avy any an-danitra sy et and an-tany ary ny fotoana manakaiky ny tranga izay nambara taminao mialoha mba hivavaka, hanoloranao fifadian-kanina sy sorona; mba hanampiana ny sahirana sy ny mamoy fo, hanolotra ny mofon'ny fijoroana ho vavolombelona momba ny fiainana ao amin'ny Sitrapon'Andriamanitra.
Manana safidy malalaka ny olombelona, ​​izay tokony hampiasainy hivavaka, hiasa sy hiasa amin'ny maha-zanak'Andriamanitra marina, mba hanetren-tena ary tsy miavonavona sy miavonavona. Ho tafatsoaka eny an-dalana ny mpirehareha.
Mivavaha amin'ny fotoana sy ny vanimpotoana; ho avy ny Horohorontany lehibe; (1) fotoana tsy misy intsony ny fotoana, izany ny "izao!" samy niandry sy hatahorana izany. Raha tsy mijanona amin'ireo izay maniry anao ho very ianao dia tohizo amin'ny lalana aseho fa tsy miala amin'izany, tsy manadino fa ny devoly dia mitroka toy ny liona mierona mitady izay hohaniny. Mitandrema amin'ny asanao sy ny ataonao, aza afangaro miaraka amin'ireo mikorontana; mitandrema - olonao fa tsy olon-dratsy. Mijaly be ny Fiangonan'i Jesosy Tompontsika sy Jesosy Tompo. Ny fahadisoana dia hiteraka fahaverezam-pinoana, ka izany no antony ilazana ny finoana tsy mihetsika, finoana ny fanatrehan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy Tompontsika amin'ny zanany lahy iray sy ny zanany vavy. (2)
Mivavaha, zanak'Andriamanitra, mivavaha ho an'ny fiovan'ny rehetra.
Mivavaha, ry zanak'Andriamanitra, mivavaha mba hitohizanao mahatoky hatrany.
Mivavaha, mivavaha ho an'ireo firenena iharan'ny fihoviana tsy ampoizina ary tsy tiana.
Mivavaha, mivavaha ho an'izay mitazona ny avonavona, hamitaka ny rahalahiny.
Mivavaha ho an'izay mijaly noho ny hanoanana ary ireo miaritra fahoriana noho ny fahamarinana momba ireo mpitondra eto an-tany.
Ry malalan'Andriamanitra, ny fotoana ho avy dia ho fitaka: aza mania. Izany no antony maha-zava-dehibe ny mivavaka amin'ny fonao, manomana ny FISORANANA FANGALOHANA ianao. (3) ary milamina ianao.
Mivavaha ho an'i Chile sy ho an'i Kolombia. Tsy hijanona ny tetikasan'ny ratsy.
Farany, ny fon'ny tsy manam-pahaleman'ny Tompontsika sy ny Renin'ny lanitra sy ny tany dia handresy ary tsy hikasika ny olombelona ny ratsy.
Vahoakan'Andriamanitra: Aza mijanona! Fotoana tokony hiambina anao izao. Aza adino fa ho avy ny fampitandremana, ary hamely ny olona tahaka ny tselatra izy.
Iza no tahaka an'Andriamanitra? Tsy misy tahaka an'Andriamanitra!
Jereo ihany koa Fatima, ary ny Famoronana Lehibe nataon'i Mark Mallett[↩]
Jereo ihany koa Finoana tsy azo tanterahina amin'i Jesosy nataon'i Mark Mallett[↩]
Fanambarana ho an'i Luz de Maria momba ny fampitandremana lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny zanak'olombelona…[↩]
Posted in Luz de Maria de Bonilla, Messages, Ny fanazavana momba ny feon'ny fieritreretana, Fampitandremana, fanavaozana, fahagagana.
← Pedro Regis - Tonga ny fivadiham-pinoana
Valiny ho an'i Fr. Joseph ... →